Cunnooyinka Ciribta Hormarka Maqaayada Qaybta 2 - Cuntooyinka Lugaha
Cunnooyinka Sahanka Hordhaca Makhaayadaha Heesaha Qaybta 2
Waxaan dhawaan ku dhawaaqnay lix makhaayadood Taasi waxay nagala qayb geli doontaa Cunnooyinka Heellada, waxaanan mar kale halkan u nimid inaan ku dhawaaqno afar kale! Aad ayaan ugu faraxsanahay in mid kasta oo ka mid ah cunnooyinkan ay la imaan doonaan cunnadooda macaan dhacdadan, laakiin sidoo kale inay taageerayaan Cuntooyinka Lugaha iyo bixinta cunnooyinka diiran, nafaqada leh ee waayeelka iyo dadka naafada ah ee ku nool magaalooyinka Mataanaha ah.
Gandhi Mahal waa makhaayad Bangaladesh / Hindi ah oo ka shaqeysa inay ku bixiso waayo-aragnimo nabadeed labadaba cuntada ay u adeegaan iyo deegaanka ay ku nool yihiin. Cunnada waxaa lagu daaweeyaa muusikada tooska ah fiidkii Jimcaha illaa Axadda. Waxaan jecel nahay in ay ku daraan siyaasadaha mas'uuliyadda deegaanka iyo joogtaynta, iyo dhaqaalaha anshaxa, mana sugi karno in aan cunnadooda ka soo qaadno Meals on Heels sanadkan!
Cunnooyinka Wheels Jikada Fursadaha
Sannadkii la soo dhaafay Cunnooyinka Lugaha ayaa qaaday tallaabada xiisaha leh ee ah furitaanka jikadayada, Jikada Fursadaha, jikada ugu horreysa ee si adag ugu heellan u adeegidda barnaamijyada Cunnada ee Deegaanka. Jikadaan cusub waxay keenaysaa diyaarinta cuntada gudaha, yaraynta qarashka cuntada iyadoo la siinayo ikhtiyaarro menuyo caafimaad leh oo habeysan. Meals on Wheels waxay la shuraakoobeen Open Arms of Minnesota, iyo macaamiisheena Meals on Wheels waxay bixiyeen jawaab celin weyn oo ku saabsan cuntada cusub ee ay helayaan. Farxad kamaanaan dareemi karin in aan ku dhawaaqno in Jikada Fursadaha ay qaar ka mid ah cuntadooda u keenayaan Cunnooyinka Heels si ay ka-qaybgalayaashu u soo tijaabiyaan cuntada aan ku faanno inaynu ku siinno Cunnada Dhirta.
Pizza Lucé waxay soo bandhigeysay cunnooyinka cunta-cunnada sanadihii la soo dhaafay, sanad walbana waan ku faraxsanahay inaan iyaga iyo iyaga u dhimanno-pizza-da xafladdayada. Iyada oo leh noocyo kala duwan oo pizzas ah, waxaan had iyo jeer ku qanacsan nahay rajada noocee ah nooca pizza lagu bixin doono Meals on Heels! Haddii aadan sugi karin illaa iyo bartamaha Ogosto si aad Pizza Lucé u hesho, ku joogso mid ka mid ah siddeed meelood oo ay ku leeyihiin Minnesota.
Maqaayada 'Mystic Steakhouse'
Mystic Steakhouse, oo ku yaal Mystic Lake Casino, waa mid ka mid ah guryaha ugu sarreeya ee magaalooyinka mataanaha ah. Haddii aad raadineyso habeen wanaagsan, u jiheynta Mystic Lake Casino Hotel waa ikhtiyaarka ugu fiican. Ku dhufo khamaarka, ku raaxee madadaalo, iskuna day hilib digaag iyo cunno badeed oo ay 'Mystic Steakhouse' bixiso. Ma sugi karno inaan isku dayno qaar ka mid ah nafteena Cunnooyinka Ciribta!
Haddii aad raadineyso cunno-cunno heer sare ah oo Vietnamese ah, ha u sii dheerayn! Bep Eatery wuxuu leeyahay laba goobood, mid ka mid ah Taagga Shanaad Street, iyo kan kale oo ku yaal Lasalle Plaza. Waad iska ilaalin kartaa safafka dhaadheer ee badanaa la yimaada booqashada Bep, sababtoo ah waxay ka mid noqon doonaan maqaayadahayada Meals on Heels sanadkan! Afkeena ayaa waraabinaya kaliya ka fikirkeeda.
Ha seegin isku-darka noocaan ah ee isku-dhafan ee cunnada magaalooyinka Mataanaha ah. Hel tigidhadaada halkan! Kuwa idinka mid ah ee horey u iibsaday tikidhadaada, u soco sidayada Bogga Facebook. Waa habka ugu wanaagsan ee lagula socon karo hadiyado bixinta, ogeysiisyo badan oo makhaayadaha ah, iyo dhammaan cuntooyinka kale ee ku saabsan wararka Heels.
Ogosto 3, 2017